Tsiahin’ny 2018: 50 taona nanaovana hosodoko i Jean A. Ravelona | NewsMada
Tsiahin’ny 2018: 50 taona nanaovana hosodoko i Jean A. Ravelona
Taona namirapiratana iny 2018 iny ho an’ny mpanakanto maro. Anisan’izany i Jean Andrianaivo Ravelona, anisan’ireo nitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara, any ivelany any, amin’ny fanehoana ny talentany eo amin’ny hosodoko.
Mbola voaporofo ny maha matihanina sy andrarezina azy, tamin’iny taona lasa iny.
Raha tsiahivina, ny volana jona 2018, nandritra ny “Salon Agra” tany Gagny, Frantsa, norombahin’ity mpanakanto ity ny “Prix Manet”. “Vers le centre de l’univers” ny lohahevitry ny hosodoko nahazoany loka. Efa indroa izao ny namirapiratra sy nandrombaka loka i Jean Andrianaivo Ravelona, nandritra ny hetsika « Salon de l’Agro ».
Taon-dehibe ho an’ity mpanao hosodoko fanta-daza ity ny 2018 ary mipetraka ho tantara. Nanamarika ny 50 taona nanaovany hosodoko izy ary maro ireo hetsika notontosaina, tany Frantsa, hampitoetra izany ho tantara holovain’ny taranaka mifandimby.
Natao, nandritra ny “Andro ho an’i Madagasikara”, tany amin’ny foiben’ny Unesco*, ny lanonam-panokafana ny tsingerintaona, ny volana septambra teo. Iray volana lasa koa, nitohy tao amin’ny Château d’Asnières, toerana manan-tantara ho an’ny tontolon’ny hosodoko, ny hetsika.
Araka izany, tsy mitsanga-menatra fa manana ny toerany, eken’izao tontolo izao, ireo mpanakanto malagasy, any ivelany any, raha tarafina amin’ny fankasitrahana sy ny hetsika tanterahina any, toy ny vitan’i Jean Andrianaivo Ravelona.